ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းတွင် လူမျိုးနွယ်၀င် အသီးသီး စုပေါင်းနေထိုင် လေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီ အေးချမ်းစွာ
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ - အပိုင်း (၁၀)
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' ကယျတငျခွငျး၊ ဖွောငျ့မတျခွငျးတရား အခမဲ့ရရှိတဲ့ကြေးဇူးတောျလား သို့မဟုတျ ကယျတငျခွငျးနဲ့ ထိုကျတနျအောငျ ကွိုးလုပျဆောငျရတာလား '' ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို Rev. Richard Hla Min
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ - အပိုင်း (၉)
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ - အပိုင်း (၉) ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' ယုံကွညျခွငျးရှိရုံမြှဖွငျ့ ကယျတငျခွငျးရရှိနိုငျသလား '' ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို Rev. Richard Hla Min Oo ကနေ ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ - အပိုင်း (၈)
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' ခရစ်တော်၏ ပုံတော်ပါတဲ့ ကားတိုင်ကိုအသုံးပြုသင့်သလား ဒါမှမဟုတ် ပုံတော်မပါတဲ့ ကားတိုင်ကိုအသုံးပြုသင့်သလား '' ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို Rev. Richard Hla Min Oo ကနေ ဖြေကြားပေးသွ
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ - အပိုင်း (၇)
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က အသုံးပြုတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကက်သလစ် သာသနာတော်က အသုံးပြုနေတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ နှစ်ခုကြားမှာ ဘာတွေ ကွာခြားမှုရှိသလဲ ၊ ဘာ့ကြောင့် ကွဲပြားမှ
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ အပိုင်း (၆)
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' သမ္မာကျမ်းစာက အရင်တည်ရှိတာလား (သို့မဟုတ် ) ကက်သလစ် သာသနာတော်က အရင်တည်ရှိတာလား '' ဆိုတဲ့မေးခွန်း ရဲ့ ဒုတိယပိုင်းကို Rev. Richard Hla Min Oo ကနေ ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ (5)
ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ '' သမ္မာကျမ်းစာက အရင်တည်ရှိတာလား (သို့မဟုတ် ) ကက်သလစ် သာသနာတော်က အရင်တည်ရှိတာလား '' ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Rev. Richard Hla Min Oo ကနေ ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ကက်သလစ် နှင့် ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီး နှစ်ပါး Thesis စာတမ်းပြုစုရာတွင် Mask များတပ်၍ အလုပ်လုပ်ကြ
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ဘုန်းတော်ကြီး Ashin Nyanasiri သည် စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓ အကယ်ဒမီ ကျောင်းတော်ကြီးတွင် Master (MA
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ (4)
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ တပည်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ လူဟာတရားကျင့်ရင် ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ခရစ်ယာန်မှာရော လူဟာတရားကျင့်ရင် ဘုရားဖြစ်သလား ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေး ခွန်းများကို Rev. Msgr.
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ အပိုင်း (၄)
ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ ဒီတစ်ပတ် ဘာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ တပည်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ လူဟာတရားကျင့်ရင် ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ခရစ်ယာန်မှာရော လူဟာတရားကျင့်ရင် ဘုရားဖြစ်သလား ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေး ခွန်းများကို Rev. Msgr. Dominic Jyo